लाज छोप्ने टालो खोज्दै नेम्वाङ - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १९:५१ 143 पटक हेरिएको
सुवास अर्थात् मिठो सुगन्ध । शालीन व्यक्तित्वका धनी सुवास नेम्वाङको नम्र बोलीले साँच्चै नै जनताकाे मनमा सुगन्ध । उनको शालीन व्यक्तित्व र प्रस्तुतिले सबैको मन जित्थ्यो । पटक-पटक सभामुख भएका सुवास नेम्वाङकाे यही बानी व्यहाेराले सार्वभाैम संसद्को समेत गरिमा बढाएको थियो ।
उनकाे उल्टो बोलीले उनी आफैँ लज्जित हुनुपरेको कुरा उनकै मुखबाट सुनिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् भंग गरेपछि उनी धर्मसंकटमा परे । नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत बनेका उनले अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्न थालेका छन् ।
किनभने, वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्नेसम्मको षड्यन्त्रमा सामेल सुवासले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर सुझाव दिएको कुरा कसरी पत्याउने ? कि त उनले प्रधानमन्त्रीको कदमको पुस ५ गते नै विरोध गरेको भए, जनताले पत्याउँथे । तर, सर्वाेच्चकाे बाेलीमा लाेली मिलाउँदै मैले त्यति बेलै प्रधानमन्त्रीलाई याे असंवैधानिक कदम हुन्छ भनेर भनेकाे थिएँ भन्नु… पछि दैलाे देखे भने जस्तै हाे ।
सुचनेको अर्थ ‘सुवास चन्द्र नेम्वाङ’ । उनी मुसुक्क हाँस्छन् । र, भोट माग्छन् । उनको मुस्कानमा इभाङ्गे मख्ख पर्छन् र भोट हाल्छन् । बुढापाका अझै भन्छन्– ‘सुवास नेम्बाङ सारै हँसिलो छ, भोट उसैलाई दिने हो ।’ तर, अहिलेसम्म इभाङमा विकास भने भुसुक्क ! त्यसैले त उक्ति नै बन्यो, ‘सुचने मुसुक्क, विकास भुसुक्क’ । सुवासले जति पटक चुनाव जिते, इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाटै जिते, इभाङ हाल माङसेवुङ गाउँपालिकामा पर्छ ।
ओलीको कदम ‘प्रतिगमनको छेउछाउ पनि होइन’ भन्दै कराउने नेम्वाङ आज ‘मैले जे भनेको थिएँ, सर्वोच्चको फैसला सोही बमोजिम आयो’ भन्दै कुर्लेको सुन्दा रमाइलो लाग्छ । यो भन्दा काइते दावी अरु के हुन सक्छ ?
सुवास नेम्वाङ नेता, संविधानसभाका अध्यक्ष वा सांसदमात्र होइनन् । उनलाई संविधानविद्को रुपमा समेत हेरिन्छ । उनी विश्वका संविधान र कानूनबारे राम्रो जानकारी राख्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको मतियार हुन किन तयार भएका होलान् ?
वर्तमान संविधानको केस्राकेस्रा थाहा भएका व्यक्ति कसरी संविधानविपरित काम हुँदा संविधान समाप्त पार्न तयार भए ? शालीन प्रस्तुतिबाट दुनियाँलाई मख्ख बनाउने नेम्वाङप्रति यस्तै प्रश्न थिए ।
नेम्वाङको प्रतिकृयाको सार यस्तो हुन्छ, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो कदम असंवैधानिक हो, सर्वोच्चले बदर गर्छ र गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थिए, आज त्यही भयो !’ उनले यसै भन्न खोजेका हुन् । हिजो प्रतिगमनको मतियार बन्ने, आज बेठिक थियो भनेको थिएँ भनेर तर्क गर्नेलाई लोकले ‘काइते’बाहेक अरु उपमा दिदैन ।
ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसविरुद्ध फैसला गरेको तीन दिन अगाडि विराटनगरमा मच्चिमच्चि ‘प्रतिगमनको छेउछाउ पनि होइन’ भन्दै कराउने नेम्वाङ आज ‘मैले जे भनेको थिएँ, सर्वोच्चको फैसला सोही बमोजिम आयो’ भन्दै कुर्लेको सुन्दा रमाइलो लाग्छ । यो भन्दा काइते दावी अरु के हुन सक्छ ?
नेम्वाङ भन्छन्– ‘रेकर्ड बिग्रेको होइन, रेकर्ड राम्रो बनेको छ ।’ नेम्वाङलाई बिग्रन लागेको त थाहा रहेछ । तर, थाहा हुँदाहुँदै मतियार बनेपछि लाज छोप्न ‘सर्वोच्चको फैसला राम्रो रेकर्ड हो’ भन्न परेको छ ।